thuthulay – Page2– ThuThuLay
(19.7.2020)ရက်နေ့ ည (8)နာရီအချိန်ခန့်တွင် လုံးခင်းကျေးရွာ အောင်ရာရပ်ကွက်နေ ကျနော် မောင်စိုးပိုင်သည် သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူထံမှ မှော်စီစာမှော်မှ ထွက်သည့်(40)ကျပ်သားအရွယ် (ပုံပါ)ရေခဲသားကျောက်အား လုံးခင်းညကျောက်ဝိုင်းသို့ ပွဲတိုက်ဖို့ယူလာစဉ် ရပ်ကွက်(4) ဦးကျော်သောင်း၏ အိမ်ရှေ့အရောက်အမည်မသိ လူ(၂)ယောက်မှလုယူပြီးဆိုင်ကယ်ပေါ်သို့တက်ခါ မှော်စီစာကျေးရွာဖက်သို့မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါ​သည်။ အဆိုပါကျောက်မှာ …
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှက်ကိုကာကွယ်ခဲ့သူအညတရသူရဲကောင်းဟာ ယခုအချိန် လမ်းဘေးမှာ တောင်းရမ်းနေရတဲ့အဖြစ် ..(ရုပ်သံ)
အာဇာနည်နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်အာဇာနည်ဗိမာန်ကို ဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့ တရားခံအားအရှင်ရအောင် အသက်စွန့်ပြီး ဖမ်းဆီးပေးခဲ့သူ အမေ့လျော့ခံ အညတရသူရဲကောင်းတစ်ဦးရဲ့ နေဝင်ချိန် (သို့မဟုတ်) ဓားစန်းရီ ရန်ကုန်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ နေအိမ်ခပ်စိပ်စိပ်ရပ်ကွက်ထဲက အိမ်ကလေးမှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၈၀ ကျော် အဘွားအိုတစ်ဦးကို ဂရုပြုမိသူတွေ …
၅ နှစ်တိတိ လက်ခမယူဘဲ နဂါးရုံဘုရားတွေ အခမဲ့ဆောက်လုပ်ပေးတဲ့ လူငယ်လေး
ပရိသတ်ကြီးရေ ‌လောကမှာမိမိတတ်တဲ့ ပညာနဲ့ အသက်မွေးတာဟာ ကောင်းတဲ့ အလုပ်ပါနော်…ဒီလိုပဲ မိမိတတ်ထားတဲ့ ပညာရပ်နဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနိုင်သူတွေဟာ ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်ပါပဲ…. ခုပြောပြမယ့် လူတစ်ယောက်ကတော့ မိမိတတ်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ ၅ နှစ်တိတိ ပိုက်ဆံမယူဘဲကုသိုလ်ပြုခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်…ဒီအကြောင်းလေးကို ခုလို …
July 18, 2020 By thuthulay Local
ကလေးတွေကိုလာမယ်ဆိုတာကြိုမပြောဘဲ အိမ်ရောက်မှ Surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်းနိုင်းရဲ့ Video လေး
တစ်ခေတ်တစ်ခါက နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေကြားမှာ အရမ်းကို ရေပန်းစားနာမည်ကြီးနေသူလေးကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး နိုင်းနိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ပြည်သူချစ် မင်းသားတစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ …
July 18, 2020 By thuthulay Celebrities
ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးကိုသွားရင်း ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ သားသမီးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါ ဦးကျော်ကို အလွန်လွမ်းဆွတ်သတိရနေခဲ့တဲ့ စင်ရော်မောင်မောင်
စင်ရော်မောင်မောင်ကတော့ အောင်မြင်တဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလောကမှာ ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို တခဲနက်ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဦးကျော်ဟိန်းတစ်ယောက် ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဆုံးပါးသွားခဲ့လို့ ပရိသတ်တွေရော အနုပညာရှင်တွေပါ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။. ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးကို …
ဂဠုန်ဦးစောအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မြင်တွေ့ရမယ့် ဆုပန်ထွာရဲ့ခင်ပွန်း ဥက္ကာကျော်ကို မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ကာ စမ်းသပ်ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ “အောင်ဆန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို အများဆုံးရရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချော ဆုပန်ထွာရဲ့ ချစ်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုဥက္ကာကျော်ကလည်း “အောင်ဆန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ကိုဥက္ကာကျော်ဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ …
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားတောင်း ညောင်ငုတ်တို ကျေးရွက မွေးရာပါ ၀ဋ်ကြွေးဆပ်နေရတဲ့ နွားကလေး
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားတောင်း ညောင်ငုတ်တို ကျေးရွာမှာ မွေးတဲ့နွားပါတဲ့….။ အမေနို့တောင် စို့လို့မရလို့ ဆလင်းနဲ့ထိုးထည့်ပေးရပါတယ်…..။ ဝဋ်ကျွေးရှိရင်တော့ ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် ပေးဆပ်နေရမှာပဲလေ….။ ဝဋ်ကျွေးတွေ ကြေပါစေ နွားလေးရေ……။ ဟယ်….အကုသိုသ်ကံတရားက သေးတယ် ၊ ကြီးတယ်မရှိ အားလုးံကိုယ်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့မှာနော်…။ ဝဋ်ကြွေးတွေက …
July 18, 2020 By thuthulay Knowledge
ငေးမောရလောက်အောင် ထိမိနေတဲ့ ပုရိသတွေ ကြွေသွားစေမယ့် အိချောပို ရဲ အလန်းစာ့း ဗီဒီယို
စူစူလို့အားလုံးက ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီး ချောလေး အိချောပိုကတော့ အနုပညာပျိုးခင်းရဲ့စင်တင်မင်းသမီးအဖြစ်ကနေ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဆိုရင် အိချောပိုက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ မနားတမ်းရိုက်ကူးနေရပြီး ထိပ်ဆုံးနေရာ ကနေ အောင်မြင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။အမာခံပရိသတ်တွေလည်း အများအပြား …
နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပရိသတ်အားပေးတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သူ နေခြည်ဦးကတော့ မိန်းကလေးတိုင်းအားကျနေရသူတစ်ယောက်ပါ။ ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဘဝကလာသူဖြစ်တဲ့အပြင် ဘာလိုလို အမြဲထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ မိဘတွေကြောင့် ချီချီဘဝကတော့ လိုတိုင်းတ ရနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပြည့်နဲ့ အနုပညာခရီးကိုလျှောက်လှမ်းခဲ့ပြီး ပရိသတ်အချစ်တွေရရှိလာသူ နေခြည်ဦးကတော့ မနေ့ညက ” …
ဦးဇင်း ကိတ္ထိသာရ (ကျော်ဟိန်း)ရေးသားခဲ့တဲ့ အမှာစာလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ သားညီ
ပရိသတကြှီးရေ ပှီးခဲ့တဲ့ ရကအြနညြးငယလြောကကြ ပရိသတတြှေ အားပေးခစွခြငခြဲ့ရတဲ့ ဦးဇငြး ကိတျထိသာရ (မငြးသားကှီးကွောဟြိနြး) ပွံလှနတြောမြူသှားခဲ့တာကှောငြ့ ပရိသတတြှသောမက အနုပညာရှငတြှကပေါ ကှကှေဲဝမြးနညြးနခေဲ့ရပါသေးတယြ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ပရိသတတြှရေဲ့အခစွတြောဖြှဈတဲ့ သားညီကတော့ ဦးဇငြး ကိတျထိသာရရေးသားခဲ့တဲ့ အမှာစာလေးတဈခုကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနရြကစြာမကွနြှာကနေ ဖောပြှလာခဲ့ပါတယြ။ …